Indlela Yokuphila | May 2022
'Idolophu yasekhaya' uBen kunye nentombi ka-Erin Napier bamqhekeza uTibia kunye noFibula ePakini
U-Erin Napier uthathe i-Instagram ukuze abelane ngokuba intombi yakhe uHelen yaphula i-tibia kunye ne-fibula (amathambo emilenze emibini) ngelixa idlala epakini.
Amathambo eDolophu yasekhaya eDepho aQinisekayo asizisela uvuyo ngexesha elinzima
Amathambo eenyawo zasekhaya eDepho aqhubekile nokwenza ukubonakala kwiinyanga ezilandela iHalloween. Nasi isizathu sokuba yinto entle leyo.
Ngoobani uErin noBen Napier? Iinyani ezili-19 malunga neenkwenkwezi zeKhaya laseHGTV
Yazi iinkwenkwezi zaseKapa zaseKhaya uBen noErin Napier njengoko bevuselela idolophu yabo encinci yaseLaurel, eMississippi. Nantsi yonke into ekufuneka uyazi, kubandakanya indlela esihlangana ngayo isibini seHGTV.
Izinto ezili-15 obungazi nge-Mina Starsiak Hawk ye-HGTV
Inkwenkwezi 'yamathambo alungileyo' Mina Starsiak Hawk ingaphezulu nje kwengcali yekhaya. Ungumama-we-2, umfazi, umbhali, umnini venkile, nokunye okuninzi.
Iifilimu zeKrisimesi ezingama-25 ezibalaseleyo zeXesha lonke
Uninzi lwezi nkwenkwezi zeCandace Cameron Bure.
Izindlu ezincinci onokuzithenga kwiAmazon -Izindlu eziSebenzayo onokuzithenga kwi-Intanethi
Izindlu ezincinci zishushu kunanini na ngaphambili, njengoko kungqinwa yile yokuba ezi zindlu zincinci zincinci kunye neeshedi ziyafumaneka ukuze zithengwe eAmazon (ewe, ngokwenene!).
Iinyani kunye nembali yehotele uCecil-Ngaba uhlala kwindawo ephambili ekuHunyiwe?
Funda konke malunga namabali ayinyani ngasemva kweHotele uCecil, umva we-Netflix's binge-desk-of-deske-series, ukusuka kwi-Art Deco heyday ukuya kubaqeshi bayo ababulalayo.
UDave kunye noJenny Marrs beHGTV: Umtshato, abantwana, i-Backstory
'UFixer to Fabulous' ulandela iBentonville, eArkansas indoda-kunye nenkosikazi uJenny kunye noDave Marrs njengoko behlaziya izindlu ezindala eMantla Ntshona eArkansas.
UChristina Haack kunye neMbali yoThando ka-Ant Anstead yaNgalunganga
UChristina Haack we-HGTV (owayesakuba ngu-Anstead no-El Moussa) watshata no-Ant Anstead ngo-2018. NgoSeptemba 2020, babhengeza ukuba bayazahlula. Nazi iinyani.
Ezi Zizinto zexabiso eziXabiso eziGcinelwe kwiNotre Dame Umlilo - Isithsaba sameva esisindiswe kwimililo yeNot Dame.
Indlu yecawe yase Notre Dame eParis, eFrance sisikhumbuzo esaziwa kwihlabathi liphela, kwaye likhaya lezinto zembali zamaKristu ezixabisekileyo- uninzi lwazo oloyikayo abantu alunakuphumelela kwimililo etshabalalisayo ngo-Epreli 15. Ngethamsanqa, enkosi Umsebenzi wabaphenduli bokuqala, izinto ezininzi zexabiso zigciniwe emlilweni. Iziqwenga ezazigcinwe kweso siganeko ziya kuthuthwa kwaye zigcinwe kwenye indawo ebalulekileyo eParis, kwiMyuziyam yaseLouvre, okwangoku njengokuba icawa ilungiselela ukubuyiselwa. Nazi izinto ezibalulekileyo ezazisindiswe emlilweni.
Inyanga enkulu yeSuper Wolf Wolf kaJanuwari 2019 -Iinkcukacha, indlela yokuBukela, kunye nokunye
Inyanga yengcuka yegazi ezayo iza ngoJanuwari 20, 2019 kwaye iyaphambana njengoko kuvakala. Nantsi yonke into ekufuneka uyazi malunga nomsitho onqabileyo, kubandakanya nendlela yokuwubukela apho ukhoyo.
Yiyo le nto amaTyhini anxibe amakhonkco esandla sasekunene- Intsingiselo yemisesane yasekunene
Oku kuthetha ntoni xa owasetyhini enxibe iringi yesandla sasekunene.
I-2019 ye-Orionids Meteor Shower Peak Times kunye neMihla
Le meteor shower yenzeka kanye ngonyaka kwaye incopho yayo izakwenzeka kwiveki ezayo. Oku kuthetha ukuba iimeteor zayo ziya kuba ziqaqambe kakhulu kwaye ngokukhawuleza.
Ikhaya le-HGTV 'kwakhona ngeeFords': iNkulumbuso, iPlothi, + abaPhangi
U-Leanne no-Steve Ford baya ekhayeni labo ePittsburgh kuthotho lwabo olutsha lwe-HGTV 'Ekhaya kwakhona kunye neMikhosi,' besasaza rhoqo ngokuhlwa ngoLwesibini nge-9. ET / PT.
Ngowuphi uMbulelo wokuqala? -Imbali yokuBulela
Ukuba unomdla malunga neengcambu zale holide yaseMelika, nantsi isifundo esincinci kwimbali yokwenyani yokuBonga.
21 Amakhethini e-DIY ayilula ukwenza-Indlela yokwenza i-No-Sew Curtain
Ngaba awufumani makhonkco omthandayo? Ukujika awusoloko ufuna umatshini wokuthunga ukuze uzenzele unyango oluhle ngefestile. Ukusuka kumnyama ukuya kwincindi yokubuyela kwithebhu yangasemva, uninzi lwee-DIYs ezingafunekiyo ziyafikeleleka kwaye kulula ukuzenza.
Ngaba amakhandlela ayingozi kwaye ayityhefu kuwe?
Ndothukile, andizange ndicinge ukuba amakhandlela am athandekayo eVoluspa angandityhefu xa egcwalisa ikhaya lam ngamacebo amnandi evanilla kunye neepesika. Ndifunde inqaku, ndaza ndalifunda elinye, nelinye-- bonke bendilumkisa ukuba amakhandlela am ayabonakalisa ubomi bam. Kodwa nantsi into, xa ndijonga kufutshane ndifumanise ukuba uninzi lwala manqaku alunazo izifundo okanye iinyani ezinzima zokuzixhasa. Ke ndaye ndagqiba kwelokuba ngaphambi kokuba ndilahle onke amakhandlela am amnandi (kunye namaxabiso abizayo) kufuneka ndenze uphando olululo ukujongana nawo onke amabango e-intanethi apeyinta amakhandlela njengombulali othuleyo. Ukushwankathela, amakhandlela awasenziwanga ngemisonto yentloko ekhokelayo, i-wax yawo ayinetyhefu, kwaye akukho mfuneko yokuba uzive ungonwabanga ngenxa yevumba lawo elimnandi (ngaphandle kokuba une-asthma okanye i-aleji). Ke ngaphandle kokuba ukhathazekile malunga ne-PM okanye ii-VOCs ekhayeni lakho ulungile ukuba zivumele zitshise.
'Indlu yaBantwana abaGolide-Indawo, Ixabiso, kunye neMbali yeNdlu kaBlanche Devereaux
Ii-80s sitcom 'Amantombazana egolide' asenze sathandana nekhitshi likaBlanche. Nantsi into eyenzekileyo kwikhaya elinemifanekiso, ebekwe eMiami, FL.
Ngaphakathi kwi-HGTV yeKhaya eli-Smart le-2020
Ikhaya elinikezelwe ngokupheleleyo elixabisa i-1.5 yezigidi zeedola liseWexford kwingingqi yasePittsburgh, ePennsylvania. Ukusukela ngoku kude kube nge-12 kaJuni, ngo-2020 abo banomdla banokungena ukuya kuthi ga kabini ngemini ithuba lokuphumelela ikhaya, kunye ne- $ 100,000 evela kwiLendingTree, kunye nemoto yokuqala yeMercedes-Benz GLB.
'Indlu yeTV eyaziwayo yeGolide yaBantwana sele ithengisiwe
Ikhaya elidumileyo leTV laMantombazana aMagolide lahamba laya kwimarike okokuqala ngqa ngoJulayi 2020. Emva kwenyanga, sele ithengisiwe. Nantsi into esiyaziyo ukuza kuthi ga ngoku.
Uhlobo lweSpanish lokuhombisa igumbi lokuhlala
Imithi yekrisimesi ehonjiswe kakuhle
iintlobo zeentyatyambo ezintle
indlela yokususa iphepha lodonga